FBC - Tajaajilli 'Elektirikaa' Itiyoophiyaa hojjattoota gocha badii raawwatan irratti tarkaanfii fudhachaa akka jiru hime
Tajaajilli 'Elektirikaa' Itiyoophiyaa hojjattoota gocha badii raawwatan irratti tarkaanfii fudhachaa akka jiru hime
Finfinnee, Bitootessa 4, 2010 (FBC) Tajaajilli 'Elektirikaa' Itiyoophiyaa bu’aa ba’ii maamiltootaa hambisuuf hojjattoota gocha badii raawwatan irratti tarkaanfii hanga hojiirraa geggeessuu fudhataan jira jedhe.
Hoji-raawwachiisaan Olaanaa tajaajilichaa Obbo Goosaayee Mangistee Faanaa Biroodkaastiing Korporeetitti akka himanitti komii tajaajilamaa furuuf Tarsiimoo Ittisa Malaammaltummaa fi Hojimaata badaa baasuun hojiitti seenneerra jedhaniiru.
Hoji-raawwachiisaan Viijilaans tajaajilichaa Obbo Kiiroos Haddush rakkinicha bu’uura irraa furuuf barsiisuu dabalatee deggarsaa fi hordoffii taasifamu malee seeraan akka gaafataman taasifamaa jira.
Lakkooftuu hin-eyyamamne maxxansuu, dabaree malee keessummeessuu fi dhaabbilee gudguddoo waliin ammoo waliigaluun rakkoolee naamusaa mul’atan keessaati.
Dhaabbatichis rakkoolee kana fakkaatan furuuf hojii qulqulleeffachuu kan raawwate yoo ta’u, waggoota sadii darbanitti hojjattoota badii balleessan 45 hojii irraa geggeesseera.
Hojjattoota isaa 206 ammoo adabbii gara-garaan kan adabe yoo ta’u, akka ulfina badichaatti xalayaa akeekkachiisaa, adabbii miindaa hanga baatii sadii, sadarkaa irra jiru irraa buusuu fi waggaa lamaaf guddina sadarkaaf akka hin-dorgomne gochuun keessatti argama.
Bara bajataa kanattis hanga yoonaa rakkoo naamusaa namoota 69 komii fi eerumsaan isa qaqqabe qorataa jira.
Kana keessaas 25 dhimmi isaanii qulqulleeffatamee adabbiiwwan gara-garaa wayita irratti darbu 26 badii balleessuunsaanii mirkanaa’ee murtoon akka kennamu qaama olaanuuf dabarfameera jedhameera.
Dhimmi 4 qorannoo yakkaa federaalaaf kan dabarfame yoo ta’u, 2 mana-murtiitti himati irratti banameera.
Gabaasi Sarkaalam Geetaachoo akka eerutti kanneen hafan ragaan kan irratti hin-argamnee fi adeemsa qorannoo irra kan jiran ta’uudha kan ibsame.
Oduuwwan Biroo « Ayarlaand Itiyoophiyaaf deggarsa Yuuroo miliyoona 3 arjoomte	Manni marichaa waliigaltee biyyaa uumuuf akka hojjetu beeksise »